အိုးဝေ: ဘွန္တော နဲ့ နံနက်ခင်းအလှ
Posted by ဇနိ at 2:17 AM
- July 29, 2008 at 5:14 AM
ဗဟုသုတအလို့ငှာ ဖတ်၊ မှတ်သွားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာ မမေ့နိုင်တဲ့ ရိုးရာဓလေ့မို့
Republic July 29, 2008 at 7:20 AM
မဇနိ ရေးတဲ့ ပို့စ်တိုင်းက တကယ့်အတိတ်ဖြစ်ရပ်လေး တွေကို အခြေခံတယ်နော် ၊၊ပို့စ်ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် မဇနိတို့အညာလေး ကိုရောက်သွားတယ်ဗျာ ၊၊
စာမရေးတာကြာနေတဲ့ မဇနိကြီး ၊၊တော်ဒယ် တော်ဒယ် ၊၊
မောင်ဖြူ July 29, 2008 at 9:37 AM
မဇနိကတော့ ကိုယ်သိတဲ့အကြောင်းအရာကို စေ့စေ့စပ်စပ်ရေးတတ်ပ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနဲ့မတူတော့ ဗဟုသုတလဲရသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ဝါတွင်းဆွမ်းလောင်းပွဲနဲ့ ဝါကျွတ်ဆွမ်းသိမ်းပွဲဆိုပြီးရှိတယ်။ ကတော့ထိုးတာတို့၊ ဆွမ်းသပိတ်လုံးလောင်းလှူတာတို့တော့ ခုမှကြားဖူးတာ။ မဇနိရဲ့ပို့စ်လေးတွေကတော့ အညာနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ကြည်နူးစရာလဲကောင်းပ။ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ယဉ်ကျေးမှုကတော့ နေရာတိုင်းလိုလိုပါပဲဗျာ။
ဆောင်း July 29, 2008 at 10:22 AM
ကျမတို့ ရန်ကုန်အခေါ်က တော့ ဗံဒါရွက် (ဗန်ဒါရွက်) လို့ ခေါ်ကြတယ်ရှင့်။ ဓါတ်ပုံထဲက ငှက်ပျောသီးကြီးက ကြီးလိုက်တာ တခါမှ အဲလောက်ကြီးတာ ကျမအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာ မတွေ့ ဘူး။ အားရစရာကြီးနော်။
ပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တားမြစ် ထားသော... July 29, 2008 at 3:02 PM
now i can't use MM-font. Later comeback and write in burmese!
အိမ်လွမ်းသူ(မှန်နီကုန်း) July 29, 2008 at 8:39 PM
မဇနိရေ... မဇနိရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး..ရွာကိုတောင် ပိုပြီးလွမ်းလာသလိုပဲဗျာ..။
လွမ်းဆို ဓလေ့ဇရိုက်က လဲ တော်တော်လေး ကိုတူနေတာဗျ။
ကျနော်တို့ ဆီမှာလည်း အထူးသဖြင့် (သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်၁ရက် နှင့် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်)တွေ မှာဆိုရင်.. နံနက် ၄နာရီလောက်ဆိုရင်..
“ဆွမ်းချက်ရန်ထတော်မူကြပါ၊ ဘွန္တော သပ္ပုရိသ အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့" ဆိုပြီး..အင်မတန် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ တီးလုံး လေးနဲ့ လှည့်ပြီး နိုးဆော်တာလေ..။
တကယ့်ကို..ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဓလေ့ တစ်ခုပါ..။
ကျနော်ထင်တယ်... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ အထင်ရှားဆုံး (ဗမာ အဆန်ဆုံး) ဓလေ့လေးတစ်ခုပါ...။
အဲ့ဒီလို ဓလေ့ လေးတွေ ကွယ်ပျောက်မသွားအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ တော့ လိုအပ်မယ် နော်..။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မဇနိရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အရေးအသားတွေ နဲ့ ဤကဲ့သို့ ဓလေ့လေးကို ဖော်ကြူးပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ..။
မြရွက်ဝေ July 30, 2008 at 7:22 AM
အညာမှာ အမျိုးတွေရှိပေမယ့် တခါမှ မရောက်ဖူးဘူး။ မနိရေးမှဘဲ သွားလည်ချင်စိတ် ပိုပေါက်လာတယ်။ စောစောစီးစီး ဆွမ်းထလောင်းရတာ ပျော်စရာ အတော်ကောင်းမှာနော်။ အဲလိုဆွမ်းလောင်းပွဲ ကြုံဖူးချင်တယ်။ မဇနိအရေးကောင်းတယ်။ တခါထဲ မျက်စေ့ထဲပါ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်ယောင်မိတယ်။
မေအောင် July 30, 2008 at 3:39 PM
khin oo may July 30, 2008 at 8:16 PM
i also continue thinking
တားမြစ် ထားသော... July 31, 2008 at 9:48 AM
အင်း.. မဇနိရေ။ ကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောပရစေတော့။ ကိုဇနိကတော့ လက်တွဲဖော် အကောင်းစားလေးရတာပါပဲ။
တန်ခူး July 31, 2008 at 12:02 PM
မဇနိရေ… အရေးအသားက ဆွဲခေါ်သွားတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆွမ်းတွေလောင်းလို့ … ကျွန်မတို့ အညာဘက်မှာလဲ သပိတ်လုံးလောင်းတဲ့ အလေ့အထလေး ခုထိရှိသေးတယ်… မနှစ်က ရန်ကုန်ပြန်သွားတော့ ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘွန္တောအဖွဲ့ နဲ့ ဆွမ်းလောင်းတဲ့ အလေ့လေး ပြန်လုပ်ဖြစ်နေတာ တွေ့ ရလို့ဝမ်းသာလိုက်တာ… ဘွန္တောအသံက ကျက်သရေရှိလွန်းလို့ငယ်ကတည်းက နှစ်သက်ခဲ့တာ… ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် မနက်အစောကြီး ဆွမ်းကပ်ခဲ့သေးတယ်… ဒီpostလေးဖတ်တော့ ချက်ချင်းအိမ်ပြန်ချင်လာတဲ့ အထိ လွမ်းသွားတာ… ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မတွေ့ ရတဲ့ ချစ်စရာ အလေ့အထလေးတွေမိုလား…
nu-san July 31, 2008 at 7:41 PM
မဇနိရေ.. စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အသေးစိတ်ရေးပြပေးထားတာ တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ မဇနိရဲ့ စာတွေ ဖတ်ပြီးရင်လေ အညာကို လာလည်ချင်တယ်။ ၁ လ ၂ လလောက်တော့နေပြီး ရိုးရာဓလေ့တွေကို မြင်ဖူး ကြုံဖူးချင်တာ။ အမတို့ရပ်ကွက်မှာတော့ ထိုင်ဆွမ်း၊ တန်းဆွမ်း ဆိုပြီးရှိတယ်။ အိမ်နားမှာက အင်းစိန်ရွာမစာသင်တိုက်ရှိတော့ စာသင်ကိုယ်တော်တွေက အမြဲတမ်း ဆွမ်းအလှူလာခံတယ်။ တခါတလေဆို ၁၀ ပါးကျော်တယ်။ ၃ နှစ်စာသင်ရမယ်ဆို ၃ နှစ်လုံးအိမ်ကို ကြွတယ်။ ထိုင်ဆွမ်းချည်းပဲကြွတာ။ စာသင်တာပြီးတော့မှ ကိုယ့်ရပ်ရွာပြန်တော့မှ မကြွတော့တာ။
တခါတုန်းကဆို မှတ်မှတ်ရရ အိမ်မှာလေ ကိုရင်လေး တစ်ပါးကြွတာ။ အဲဒီကိုရင်လေးက နောက်ထပ် ကိုရင်လေးကိုပါ အဖော်ခေါ်လာတာ ပြီးတော့ အတူတူ လာတာမဟုတ်တော့ ကိုရင်လေးတွေကို မမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတာ။ ကိုရင်လေးတွေက များလာတယ်ပေါ့ လို့ပဲ ထင်တာ။ တရက်တော့ အမ အမေက ထိုင်ပြီး ကိုရင်လေးတွေကို စောင့်ပြီးကြည့်တော့မှ လက်ရှိ အိမ်ကို ထိုင်ဆွမ်းကြွတဲ့ ကိုရင်က ခေါ်ထားတာ နောက်ထပ် ကိုရင်အားလုံးပေါင်း ၄ ပါးလောက်ရှိတယ်။ ပေါင်း ၅ ပါးပေါ့နော်။ အမေက ကိုရင် အိမ်ကို ဆွမ်းခံကြွမယ်ပြောထားဖူးလားမေးတော့ ကိုရင်လေးတွေက ခေါင်းခါကြတယ်။ ကိုရင့်ကို ဘယ်သူပင့်ထားသလဲမေးတော့ ဟိုကိုရင်က ပင့်တာဆိုပြီး တဆင့် တဆင့် အချင်းချင်း ပင့်ထားကြတာ။ အကြောင်းစုံသိတော့ ရီလိုက်ရတာ မပြောပါနဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူတို့ကြွနေသရွေ့တော့ လောင်းပေးရတာပေါ့.. ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ညီမလေးရေ.. ဆွမ်းအလှူနဲ့ပတ်သက်တာလေး ဖတ်ရလို့ အရင်တုန်းက အကြောင်းလေး သတိရလာမိလို့ ၀င်ရေးလိုက်တာ.... :)
Taungoo August 3, 2008 at 7:16 AM
ကျွန်တော်တို့ တောင်ငူမှာတော့ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၄ ရက်ညသန်းခေါင်တည်းက ဘုရားမှလူစုကြပြီး နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားတွေ အာရုံဆွမ်းဒေသစာရီကြွကြတာ ငယ်ငယ်ကတော့ လူကြီးတွေ နှိုးမှ ထပြီးအလှူပစ္စည်းထည့်တယ်
တစ်မြို့လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လှည့်တာဆိုတော့ လူအင်အားလည်းများ အရမ်းလည်း စည်တယ်